နေ့: စက်တင်ဘာလ 19 2019
လူများ, ကြီးထွားနေထိုင်ပြီးသေဆုံး, မွေးဖွားနေကြသည်။ ဒါဟာလူတွေကိုနေထိုင်ခဲ့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. ၌ပြစ်မှားမိခဲ့ကွောငျးအချိန်နှင့်တန်ဖိုးရှိသောအရာကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အရေးကြီးပါသည်။3ထိုဒေသတွင်စက်လုပ်သမား၌အကြှနျုပျတို့၏န်ထမ်းများ၏ဘဝများလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းအတွက်စတုရန်းနေ့ညဉ့်မပြတ်တာဝန် [ပို ... ]
Bilecik YHT လမ်းညွှန်၏ရထားမတော်တဆအကြောင်း; 68059 အမှတ်လျှပ်စစ်ကို manual စက်ခေါင်းတိုးတက်၏ line ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် Eskisehir Yuksel မြန်နှုန်းရထား (YHT), ပြန်လာလမ်းကြောင်း (Alifuatpaş Eskisehir) 216 အတွက်ကီလိုမီတာ 145 + နာရီ Bilecik စင်တာအတွက် 06.08 - တူရကီကနေ Eskisehir Alifuatpaşထွက်စတင် [ပို ... ]
ပညာရှင်များ၏ကျယ်ပြန့များ၏ပါဝင်မှုများကအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ရထားစနစ်များအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပေးစက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များ။ အလုပ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ရထားလမ်းစနစ်ယခုအချိန်အထိပြုသောအမှုနှင့်၎င်းနောက်ယူခံရဖို့ခြေလှမ်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ 2019 ရထားစနစ်များအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, အစ္စတန်ဘူလ် [ပို ... ]
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ticaret AS, (KARDEMİR) ကိုယ့်ကြောင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအဖြစ်ယခုနှစ် Intern များကိုအဘို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျောင်းမှကျောင်းသားများအနေဖြင့်၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်။ ယေဘုယျKarabükအတွက်အသက်မွေးမှုကျောင်းများတွင်လေ့လာနေ 120 ကျောင်းသားများကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ 2019-2020 ကာလ [ပို ... ]
TÜDEMSAŞမိတ်ဖက်ထုတ်လုပ်၏လယ်ထွန်စက်အမြည်းအတွက်အသုံးပြုလမ်းကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - ဥရောပနှင့်မြောက်အမေရိက Helro ကုမ္ပဏီများ Nurettin ၏Gökyap Lightning TÜDEMSAŞမှ General Manager Mehmet Başoğluသူ့ရုံးခန်းသွားရောက်ခဲ့ကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုယ်စားလှယ်များ၏ပိုင်ရှင်Gökyapကုမ္ပဏီ [ပို ... ]
550 ပထမဦးဆုံးပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျင်းပခဲ့နှင့်ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံးလေကြောင်းဖြစ်ရပ်ကျော်တစျထောငျဧည့်သည်များ, ခြေပွဲတော် TEKNOFEST လေကြောင်းတွန်းအားပေးရန်တစ်ခုတည်းသောအရာအရပျဖြစ်ကြောင်း, အာကာသနှင့်နည်းပညာပွဲတော်စတင်ခဲ့သည်။ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း [ပို ... ]
affiliates ထံမှ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Co. , Akçarayဗိုလ်ကြီး Yahya ဘူတာရုံဟာ input ကိုနှင့် output ကိုအတွေ့အကြုံဝယ်လိုအားများ၏အစွန်းရောက်သိပ်သည်းဆဖို့လမ်းအပေါ်နောက်ထပ်ဘူတာရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်ulaşımpark။ နိုင်ငံသားများ၏ဘူတာရုံပိုအဆင်ပြေ entry ကိုနှင့်ထွက်ပေါက်ရစေ turnstiles ဖွင့်လှစ်ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, istanbulkart စင်တာများအတွက်ဖြစ်ပေါ်သောသိပ်သည်းဆလျှော့ချဖို့အစီအမံတစ်ခုစီးရီးကိုယူ။ အဆက်အသွယ်စင်တာများအရေအတွက်အောက်တိုဘာလ၏အဆုံးအားဖြင့်နှစ်ဆလိမ့်မည်။ istanbulkart လျှောက်ထားထားတဲ့အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ခြင်း, လျှော့စျေးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အစ္စတန်ဘူလ်အကျိုးခံစားခွင့်, [ပို ... ]
ကြောင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလမ်းညွှန် Bilecik အတွက်ရထားများ၏လွဲသွားနှစ်ခုယာဉ်မောင်းယာဉ်မတော်တဆမှုအတွက်သေဆုံးခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းအမှတ် 68059, ပြန်လာလမ်းကြောင်းကိုတိုးတက်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လက်စွဲစာအုပ်ထိန်းချုပ်မှုEskişehir Yuksel မြန်နှုန်းရထား (YHT) လိုင်း - AlifuatpaşEskişehirဖို့တူရကီထံမှထွက်မသတ်မှတ် [ပို ... ]
Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်SAMULAŞ, 'လက်မှတ်ရရှေးဦးသူနာပြုသင်တန်း' 'စည်းရုံးရေး၏နိယာမအပေါ် အခြေခံ. အဆိုပါဝန်ထမ်းများအတွက်' 'ပထမဦးစွာအကူအညီဘဝတွေကိုကယ်တင်' '။ အစပိုင်းမှာ, အ 40 န်ထမ်းန်ထမ်းများအတွက်မြန်နှုန်းလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်မကြာသေးမီကအမြတ်နှင့်အတူ Samsun အတွက်ပထမဦးဆုံးအကူအညီလေ့ကျင့်ရေးလက်ခံရရှိ [ပို ... ]
လူစုက built-in အမည်များကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်ပေမယ့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုပုံရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးသားပျောက်ဆုံးနှစ်ခုအဓိကရထားလမ်းလိုင်းများသို့ခွဲခြားသောရပ်ကွက်တစျဦး၏နာမတျော၏ဘူတာရုံပေးခြင်း။ အလွန်ရပ်တန့်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးရှိ Bursaray ။ [ပို ... ]
လုံခြုံရေး, လုံခြုံမှု, မီးဘေး, Smart အဆောက်အဦးနှင့်လုံခြုံရေးကဏ္ဍ၏အဘယ်မှာရှိရှိသမျှတို့, ISAF တစ်နှစ်-xnumxek ငါ 17 20 အစ္စတန်ဘူလ်တရားမျှတသောစင်တာဖွင့်လှစ်ဆိုက်ဘာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောအစည်းအဝေးအမှတ်! ဥရောပအာရှ ISAF တရားမျှတသော၏အကြီးမားဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များစက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့ဆောင်၎င်းတို့၏တံခါးများ 2019 ။ [ပို ... ]
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mehmet Hilmi Guler, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလည်းအပြုသဘောဖြစ်နိုင်ချေအစီရင်ခံစာ Bolaman အထိမီးရထားလမ်းကြွလာ, "နောက်ဆုံးရထားဝန်ကြီးမတ်စောက်သောအပိုင်းအထိသွားရမည်လူကြီးလူကောင်းစကားပြော," ကြောင်းသူကပြောသည်။ လစဉ်အစည်းအဝေးများပြင်ရန် [ပို ... ]
Şanlıurfaမြူနီစီပယ်, Ataturk နှင့် Birecik သဘောပေါက်အိုင်ပေါ်မှာခရီးသည်နှင့်ငါးဖမ်းစက်လှေများတွင်စစ်ဆေးခြင်း။ Halfeti, Birecik, Bozova, Hilvan, ရေနှင့်ငါးဖမ်းလှေများကျော်ခရီးသည်နှစ်စဉ်စစ်ဆေးခြင်း Siverek- အတွက်ရရှိနိုင်ကြ၏။ အဆိုပါစာမေးပွဲအချိန် Sanliurfa အဆိုအရ [ပို ... ]
Diyarbakir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခင်းကို Maintenance နှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံညှိနှိုင်းရေးဌာန, ဒါမှမဟုတ်မြို့ဖျက်ဆီးသဖြင့်မပြီးဆုံးသေးသောလမ်းဘေးစင်္ကြံပြုပြင်ကြခဲ့သည်။ Diyarbakir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လမ်းဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ Maintenance မှယာဉ်မောင်း၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဘို့လူကူးနှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအလုပ် [ပို ... ]
ဒေသခံရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်များသည် Metro နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသူတို့နှင့်အတူဆက်စပ်ဆောင်မှုများ၏အခြေခံအဆောက်အအုံမွေးစားခြင်းနှင့်အာဏာသိမ်းယူလိုက်သည့်အပြောင်းအလဲများကိုကြပြီ Related စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏စိတ်ပိုင်းဖြတ်အပေါ်နောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူကာလပြီးစီး။ Kocaeli အတွက်ထို့ကြောင့်အဆိုပါ Gebze ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုန် [ပို ... ]
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်၎င်း၏ Affiliate ကုမ္ပဏီ ORBEL, ထိုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာသည်၎င်း၏ website တွင်ကြေညာခြင်းဖြင့်င့်လင်းမြင်သာ၏နိယာမနှင့်အတူလိုက်လျောမဟုတ်သေချာစေရန်နုယန္တရား။ "နိုင်ငံသားတွေ Transparency အတွက်လိုအပ်" ဟုအဆိုပါတပ်မတော်၏အရေးပါမှုကိုပွင့်လင်းစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာမြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာဖြစ်ခြင်းကပြောသည် [ပို ... ]
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အစည်းအရုံး Inc ကိုလက်အောက်ခံ ORBEL ကြည်းတပ်ကစက်မှုလုပ်ငန်း '' နှင့်စီးပွားရေးသမားများရဲ့အသင်း (ORDUSİAD) ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာအစပျိုးခြင်းနှင့်5ကြယ်ပွင့်မယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီÇambaşıမပြတ်မတောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ လေ့လာမှု "CITA ၏နောက်ထပ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်လိမ့်မည်" [ပို ... ]
RayHaber 19.09.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
ဆက်စပ်မီးရထားသတင်းများနှင့်သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သည့်အခြားသတင်းများRayHaber 25.01.2019 တင်ဒါသတင်းလွှာ 25 / 01 / 2019 ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်တွင် 25.01.2019 အတွက်တင်ဒါမှတ်တမ်းမရှိပါ။RayHaber 04.02.2019 တင်ဒါစာစောင် 04 / 02 / 2019 ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်တွင်၊ 04.02.2019 ရက်စွဲ [ပို ... ]
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh Büyükkılıç'ınသူတိုက်တွန်းခဲ့သည် "စက်ဘီးအားကစားဖွဲ့စည်းပုံစီး" ကိုအားလုံး Kayseri မှစ. , ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်ဖြစ်ရပ်များနှစ်အောက်လူငယ်များနှင့်အတူခြေနင်းလှည့်။ မြို့တော် 500 တထောင်ကလူတစ်နှစ်Büyükkılıçနိုင်ငံတော်သမ္မတအလေးပေးတဲ့အားကစားဖြစ်စေခြင်းငှါ, [ပို ... ]
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (362) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)